Gal BBCSomali.com oo wata Isha wararka ee RSS - BBC Somali
Gal BBCSomali.com oo wata Isha wararka ee RSS
4 Juunyo 2010
BBC World Setcie, waxay idiin haysaa Isha Wararka RSS ee inta badan Luqadaha oo ay ku jirto BBCSomali.com.
Waa maxay isha wararka RSS Isha wararka RSS, waa hab fudud oo aad si dhaqso ah kula socon karto wararka aad xiisayso oo aad ka helayso BBCSomali.com.
Iyadoo wararka iyo barnaamijyada xiisaha gaarka leh si joogto ah loo diyaariyo maalinta oo dhan BBCSomali.com, ayaad Waq aqriyahaaga RSS uu helayaa cinwaanadii ugu dambeeyay, oo mid kasta oo wato war kooban – iyo Cinwaan ku geynaya bogga sheekada oo faahfaahsan ay ku qoran tahay.
Dhag sii si laguu caawiyo iyo warar dheeraad ah
Ka xulo Isha warka RSS ee aad jeclaan lahayd in aad war ka hesho BBCSomali.com liiskan hoose: Fadlan ogow: hadii aad dhag siiso baton Isha warka RSS, waxaa lagu waydiinayaa in aad soo minguuriso file ah rdf.
Ka Qayb Gal RSS
Maqal iyo Muuqaal RSS
Aqoon Guud RSS
Sideen isugu qoraa Isha wararka RSS ee BBCSomali.com?
Waxaad u baahanaysaa in aad hesho barnaamij la yiraahdo War Aqriye RSS, barnaamijkan wuxuu ku tusayaa wararka iyo aqbaarta isha wararka ee bogga aad dooratay oo Computer-kaaga saran.
Dhowr siyood ayaa isugu qori kartaa oo ay ka mid yihiin siyaabahan:
Jiid baroonka oranjiga ah ee RSS oo dhex dhig war aqriyahaaga
Jiid URL-ka Isha RSS oo dhex dhig War aqriyahaaga
Goo oo ku dhaji URL-ka Isha RSS oo dhexdhig war aqriyahaaga
War Aqriyayaal RSS oo mar walba cusub ayaa kugu wargalinaya in aad isku qori karto isha wararka RSS ee BBC-da mar walba oo aad bog eegayso.
Sideen ku helaa war aqriye RSS?
Waxaa jira oo la heli karaa dhowr War aqriyayaal RSS. Waxaad faahfaahinta ka heli karta adigoo ka raadiya Web-ka. Badanaa waa bilaash soo min guurintooda.
War aqriye kale oo RSS wuxuu ku shaqaynayaa nidaam ka duwan kan kale, waa in aad taa ogaato markaad xulanayso.
Sidoo kale, waxaa muhiim ah in aad ogaato in qaar ka mid ah War Aqriyayaasha RSS aysan awoodin in ay muujiyaan luqadaha qaar.
Isticmaalka BBCSomali.com Isha RSS feeds ee bogaaga
Waxaan dhiirigalinaynaa isticmaalka BBCSomali.com Ilaha RSS oo ka mid ah bog internet, si waafaqsan Shuruudaheena.
Si kastaba ha ahaatee, waxaan u baahan nahay in qaab caadi iyo u nisbaynta BBC-da marka ay soo muuqdaan Wararka BBC-da. Qoraalka Nisbaynta waa in uu noqdaa “Laanta BBC-da” ama “ka yimid Laanta BBC-da hadba tii haboon. Lagama yaabo in aad isticmaasho astaanta BBC-da ama calaamadaha kale ee BBC-da. Waxaa noo reeban xaqa aan ku joojin karno qaybinta wararka BBC-da. Fadlan aqri Shuruudaha iyo Xaaladaha si aad faahfaahin dheeraad ah u hesho.
BBC-du ma qaadaynayso mas’uuliyadda Isha war ee RSS, fadlan fiiri Shuruudaha iyo Xaaladaha wixii faahfaahin dheeraad ah.